Ciidamada Ammaanka 'oo Nin Hubeysan Ku Toogtay' Muqdisho - Caasimada O...
Muqdisho (Wararka Maanta) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howl-gal qorsheysan oo ciidamada ammaanka ay xalay ka sameeyeen agagaarka isgoyska Ex-Control Balcad, waxaana ciidamada ay toogteen nin hubeysnaa oo la sheegay inuu doonayey inuu weerar ku soo qaado ciidanka amaanka ee jooga halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay toogteen ninkaasi oo watay qoray AK47 ah, kadib markii uu isku dayey inuu rasaaseeyi ciidamada Booliska ee ilaalada ka haya dhismaha ka socda wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar.
Taliska Boolisk Soomaaliyeed oo ka hadlay dhacdadan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ninka la toogtay uu ka tirsanaa Al-Shabaab, isla-markaana uu doonayey inuu carqaladeeyo amniga wadadaasi oo ay waardiyo ka hayaan ciidamo ka tirsan ammanka.
“Ciidanka oo ka feejignaa dhagarta cadowga mar walba soo maleego ayaa ka hortagay ninkaan, isla markaana toogasho ku dilay,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Booliska.
Sidoo kale Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in gacanta lagu dhigay boorso uu watay ninka la dilay oo la rumeysan yihiin inuu sitay walxaha qarxa, balse haatan waxaa socda baaritaano ay weli wadaan saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya.
Ciidamo gaar ah ayaa loo diyaariyey ilaalinta dhismaha jidka xiriiriya labada magaallo ee Muqdisho iyo Jowhar, kuwaas oo loogu talagalay inay ka hortegaan weerarada qorsheysan.
Laamaha amaanka ayaa sidoo kale maalmihii u dambeeyey xoojiyey howl-gallada iyo baaritaanada lagu sugayo amniga , si looga hortego falalka lidiga ku ah nabad-gelyada
Howl-galladii ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu soo qabtay rag hubeysan oo burcad ah oo dhac ka geysanayey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.